Chọtara 268 ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, Ρωμαίους, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, Εφεσίους, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 JỌN, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
Mgbe Jisọs hụrụ na ndị a nwere okwukwe dị ukwuu nꞌime ya ịgwọ enyi ha nwoke, ọ sịrị onye ọrịa ahụ, “Nwa m, a gbagharala gị mmehie gị.”
Ha jụrịtara onwe ha ajụjụ na-asị, “Gịnị mere nwoke a ji esi otu a ekwu okwu ikwulu Chineke? Ọ bụ nanị Chineke pụrụ ịgbaghara mmadụ mmehie ya.”
Ma igosi unu na Nwa nke mmadụ nwere ike nꞌụwa ịgbaghara mmehie,
Nꞌabalị ahụ, Livayị kpọrọ Jisọs oriri nꞌụlọ ya. Ọ kpọkwara ọtụtụ ndị enyi ya, ndị ọnaụtụ dị ka ya onwe ya, na ọtụtụ ndị mmehie. Ha nile na Jisọs nọkọkwara nꞌotu tebulu na-eri nri. Ndị a ha na Jisọs na-erikọ nri bụkwa ụdị ndị na-esogharị ya ebe ọ bụla ọ na-ekwusa ozi ọma.
Mgbe ndị ozizi iwu na ndị Farisii hụrụ Jisọs ka o so ndị mmehie na ndị ọnaụtụ na-eri nri, ha jụrụ ndị na-eso ụzọ Jisọs ajụjụ sị ha, “Gịnị mere nna unu ukwu ji eso ndị mmehie na ndị ọnaụtụ na-erikọ nri?”
Mgbe Jisọs nụrụ ajụjụ ha na-ajụ, ọ sịrị ha, “Mkpa dibia adịghị akpa ndị ahụ dị mma, kama ọ bụ ndị ọrịa ka ọ na-akpa. Abịaghị m ịgwa ndị ezi omume ka ha chegharịa, kama abịara m ịgwa ndị mmehie ka ha si na mmehie ha chegharịa.”
Emesịa, ndị na-eso ụzọ ya pụrụ ikwusara ndị mmadụ ozi ọma. Ha na-agwa ndị mmadụ ka ha si na mmehie ha chegharịa.
Nꞌihi ozi a, Jọn biliri gaa nꞌobodo nile dị nꞌakụkụ osimiri Jọdan na-ekwusa, na-agwa ndị mmadụ sị, “Sitenụ na mmehie unu chegharịa ka e mee unu baptisim, ka Chineke gbaghara unu mmehie unu.”
Mgbe Pita hụrụ azụ nile ndị a nꞌime ụgbọ mmiri ndị a, o gburu ikpere nꞌihu Jisọs sị ya, “Onyenwe m biko site nꞌebe m nọ pụọ, nꞌihi na abụ m onye mmehie.”
Mgbe Jisọs hụrụ na ndị a nwere okwukwe na ya nwere ike ịgwọ enyi ha nwoke, ọ gwara onye ọrịa ahụ okwu sị, “Enyi m, a gbagharala gị mmehie gị.”
Ndị Farisii na ndị ozizi iwu nọ nꞌebe ahụ leritara onwe ha anya jụọ sị, “Ònye bụ nwoke a na-adịghị asọpụrụ Chineke? Ònye pụrụ igbaghara mmadụ mmehie ma ọ bụghị nanị Chineke?”
Olee nke karịrị mfe ikwu? Ọ̀ bụ ịgwa nwoke a sị, ‘Agbagharala m gị mmehie gị ka ọ bụ ịgwa ya sị, bilie gaa ije?’
Ugbu a aga m egosi unu na Nwa nke mmadụ nwere ike nꞌụwa ịgbaghara mmehie site nꞌigosi unu ike m nwere ịgwọ ọria.” Jisos chigharịrị gwa onye ọrịa ahu okwu sị “Nwoke, bilie, chịrị ute gị laa nꞌụlọ gi!”
Mgbe ndị Farisii na ndị ozizi iwu hụrụ ka Jisọs so Livayị na ndị enyi ya na-eri nri, ha bidoro na-ajụ ndị na-eso ụzụ ya ajụjụ sị, “Gịnị mere unu na nna unu ukwu ji na-eso ndị ọnaụtụ na ndị mmehie na-erikọ nri?”
Abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama abịara m ịkpọ ndị mmehie ka ha chegharịa.”
“Ọ bụrụ nanị ndị na-ahụ unu nꞌanya ka unu na-ahụ nꞌanya, unu atụkwala anya na Chineke ga-asị na unu mere nke ọma, nꞌihi na ndị mmehie na-ahụkwa ndị hụrụ ha nꞌanya nꞌanya.
Ọ bụrụkwa nanị onye nwere ike ịkwụghachi unu ka unu na-agbazinye ihe, ụdị ihe ọma a abụghị nke e kwesịrị ikele unu ekele nꞌihi ya, nꞌihi na ndị mmehie na-agbazinyekwa ndị mmadụ ego, ka onye ha gbazinyere kwụghachikwa ha.
Ma ugbu a Nwa nke mmadụ abịala soro unu na-eri ma na-aṅụkwa, ma gịnị ka unu na-ekwu banyere m? ‘Lee onye oke nri na onye aṅụrụma mmanya abịala, enyị ndị ọnaụtụ na ndị mmehie!’
Nꞌihi ihe ndị a nwanyị a mere, ana m agwa gị sị, a gbagharala ya mmehie ya nile o mehiere, nꞌihi na ọ hụrụ m nꞌanya nke ukwuu. Ma nwoke ahụ hụrụ m nꞌanya nke nta, ka a ga-agbaghara nanị nke nta.”
Mgbe ahụ Jisọs gwara nwanyị ahụ okwu sị, “A gbagharala gị mmehie gị nile.”
Ndị ọzọ soro Jisọs nọdụ na-eri nri ahụ bidoro na-ajụrịta onwe ha ajụjụ na-asị, “Gịnị ka nwoke a na-eche na ọ bụ? Ịgbaghara mmadụ mmehie ha!”
Ahụhụ dị ukwuu na-eche gị, gị obodo Korazin. Ahụhụ dị ukwuu dịkwa na-eche gị, gị obodo Betsaida. Nꞌihi na a sị na m rụrụ ọrụ nile m rụrụ nꞌime unu nꞌobodo Taịa na Saidọn, ha gaara echegharị kemgbe. Ha gaara eyi uwe nkịkara, wụkwasị onwe ha ntụ nꞌisi igosi na ha esitela na mmehie ha chegharịa.
Jisọs jụrụ ha sị, “Unu chere na ndị ahụ Pailet gburu bụ ndị mmehie karịa ndị Juu ọzọ bi na Galili! Ọ̀ bụ ya mere ha ji hụọ ahụhụ dị otu a? Mbaa!
“Ka m jụọkwka unu ọzọ, gịnị ka unu na-eche banyere mmadụ iri na asatọ ahụ mgbidi Silom dagburu? Unu na-eche na ndị ahụ bụ ndị mmehie karịa ndị nile bi na Jerusalem?
Baa! Otu a ka unu onwe unu ga-esikwa laa nꞌiyi ma ọ bụrụ na unu esiteghị na mmehie unu chegharịa bịakwute Chineke.”
Otu ụbọchị ndị ọnaụtụ na ndị mmehie bịakwutere Jisọs ịnụrụ ihe ọ na-ekwu.
Mgbe ndị Farisii na ndị na-ezi iwu hụrụ ha, ha tamụrụ ntamụ megide Jisọs sị, “Nwoke a na-anabata ndị mmehie. Ọ na-esokwa ha eri nri.”
O doro m anya nke ọma na ọ bụ onye ọnaụtụ ahụ karịa onye Farisii ahụ ka Chineke gbaghaara mmehie ya mgbe o biliri ịla nꞌụlọ ya. Nꞌihi na onye ọ bụla na-ebuli onwe ya elu ka a ga-eweda nꞌala, ma onye ọ bụla wedara onwe ya ala, ka a ga-ebuli elu.”
Mgbe ọtụtụ ndị mmadụ ahụ so Jisọs hụrụ ka Jisọs na-eso Zakịọs, ha bidoro ịtamụ ntamụ na-asị, “Lee na nwoke a esorola onye mmehie na-aga nꞌụlọ ya iri ihe.”
Ọ na-enye Ọkpara ike nile, ikpe mmadụ nile ikpe nꞌihi mmehie ha, nꞌihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ, Onyenwe abube nile.
Ndị ụwa enweghị ike ịkpọ unu asị, dị ka ha si kpọọ m asị. Ndị ụwa na-akpọ m asị nꞌihi na m na-atụ ha mmehie ha nꞌanya.
Mgbe ahụ ndị Farisii sịrị, “Ọ bụghị Chineke zitere nwoke a a na-akpọ Jisọs. A sị na ọ bụ onye Chineke zitere, ọ garaghị arụ ọrụ nꞌụbọchị izuike.” Ndị ọzọ nọ nꞌebe ahụ sịrị, “Olee otu onye mmehie ga-esi rụọ ọrụ dị otu a?” Nkewa batara nꞌetiti ha.
Ndị Juu kpọrọ nwoke a ọzọ sị ya, “Nye Chineke otuto nꞌihi ihe o meere gị chefuo nwoke a bụ Jisọs nꞌihi na anyị maara na ọ bụ onye mmehie.”
Ma nwoke ahụ zara sị ha, “Amaghị m ma Jisọs ọ bụ onye mmehie, ma ọ bụ onye ezi omume. Ma ọ dị otu ihe m maara, na mbụ abụ m onye kpuru ìsì, ugbu a ana m ahụ ụzọ.”
Ha zara ya sị, “Gị onye a mụrụ nꞌime mmehie, ọ̀ bụ izi anyị ihe ka ị na-eme nke a?” Ha chụpụrụ ya site nꞌetiti ha.
Jisọs zara sị ha, “A sị na unu kpuru ìsì, unu agaraghị enwe mmehie. Ma ugbu a unu na-asị, ‘Anyị na-ahụ ụzọ.’ Nꞌihi ya, mmehie unu naadịgide.”
“Mgbe ọ bịara ọ ga-ama ụwa ikpe mmehie. Ọ ga-akọwara ha ezi omume nke Chineke. Ọ ga-agwakwa ha ihe banyere ikpe nke Chineke.
Ọ ga-ama ha ikpe mmehie nꞌihi na ha ekwenyeghị na m.
Jisọs zara ya sị, “Ị garaghị enwe ike ọ bụla nꞌebe m nọ, ma ọ bụrụ na o siteghị nꞌelu rute gị aka. Ọ bụ ndị dutere m nꞌebe ị nọ nwere mmehie karịa.”
Ọ bụrụ na unu agbaghara onye ọ bụla mmehie ya, a gbagharala onye ahụ. Ọ bụrụkwa na unu ajụ ịgbaghara onye ahụ mmehie ya, a gaghị agbaghara onye ahụ.”
“Chegharịanụ ugbu a, lọghachikwutenụ Chineke! Ọ ga-ehichapụ mmehie unu.
O gburu ikpere nꞌala kwuo sị, “Onyenwe anyị, biko, agụnyekwarala ha mmehie nke a!” Mgbe o kwusịrị okwu a, ọ dara nꞌala nwụọ.
“Ma tupuu Jisọs abịa, e mere ka Jọn omee baptizim buru ụzọ bịa, idoziri ya ụzọ. Jọn kọwaara ụmụ Izirel nile mkpa ọ dị na ha ga-esite na mmehie ha chegharịa bụrụ ndị e mere baptizim.
Ọ bụ nanị otu ozizi ahụ ka m nyere ndị Juu na ndị mba ọzọ, ozizi mkpa ọ dịrị mmadụ nile ịhapụ mmehie ha ma lọghachikwute Chineke site nꞌokwukwe nꞌime Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.
Achọrọ m ịmata ebubo ha ga-ebo ya, nꞌihi ya eduuru m ya gaa nꞌọgbakọ ha ka ha tụọ ya mmehie ya nꞌihu.
1 KỌRINT 1:23
Ma anyị na-ekwusa na-asị na Kraịst nwụrụ nꞌelu obe ịzọpụta ha site na mmehie ha, okwu a na-ewe ndị Juu iwe, ma na ntị ndị mba ọzọ ọ dị ka okwu nzuzu.
1 KỌRINT 5:6
Olee uru ọ bara na unu nọ na-anya isi mgbe ihe ọjọọ dị otu a na-eme nꞌetiti unu? Ọ̀ bụ na unu amaghị na ọ bụrụ na unu agbaa nkịtị, hapụ nwoke a, ka ọ na-eme mmehie ya gaa nꞌihu, na ihe ọjọọ a ga-emekụta ndị ọzọ nọ nꞌụlọ chọọchị unu?
1 KỌRINT 5:12
Ọ bụghị ọrụ anyị ikpe ndị na-esoghị anyị bụrụ ndị Kraịst ikpe. Ma ọ bụ ọrụ anyị ikpe ndị nọ nꞌọgbakọ anyị na-eme mmehie ikpe.
1 KỌRINT 8:9
Ọ bụ eziokwu na anyị pụrụ iri ihe ọ bụla, ma jie onwe gị aka ka ị ghara iri ihe ga-eme ka nwanna gị nꞌime Kraịst, nke okwukwe ya na-esighị ike daba nꞌime mmehie.
1 KỌRINT 8:12
Cheta na ọ bụ mmehie i mere megide Kraịst, ma ọ bụrụ na ị kwagide nwanne gị nꞌime Kraịst, ka o mee ihe ahụ o chere na ọ bụ ihe ọjọọ.
1 KỌRINT 8:13
Nꞌihi nke a, ọ bụrụ na iri anụ e ji chụọra arụsị aja ga-eme ka nwanne m mee mmehie, agaghị m eso rie ya mgbe ọ bụla, ka m ghara ime ka nwanne m mee mmehie.
1 KỌRINT 15:3
Ihe m nyefere unu nꞌaka bụ ihe a gwara m, na Kraịst nwụrụ ọnwụ nꞌihi mmehie anyị, dị ka akwụkwọ nsọ kwuru na ọ ga-anwụ.
1 KỌRINT 15:34
Sitenụ na ndụ mmehie pụta! Unu emehiekwala ọzọ. Ùnu makwaara na ụfọdụ nꞌime unu amaghị Chineke? Ana m ekwu nke a ka ihere mee unu.
1 KỌRINT 15:56
Nꞌihi na ihe ahụ ọnwụ ji agbatu mmadụ bụ mmehie, ma iwu ahụ na-egosi mmehie agaghị abụkwa onye ikpe anyị.
Kraịst emehieghị mgbe ọ bụla, kama, nꞌihi anyị, Chineke mere ka o kere oke nꞌime mmehie anyị, ka o si otu a mee ka e jikọtaa anyị na ya, ka anyị nwee oke nꞌime ezi omume Chineke na-enye.
2 KỌRINT 10:3
Ọ bụ ezie na anyị bi nꞌụwa, ma ọ bụghị ike anụ ahụ ka anyị ji alụso mmehie ọgụ.
2 KỌRINT 13:2
Eburula m rị ụzọ dọọ ndị na-eme mmehie aka na ntị nꞌoge gara aga m bịakwutere unu. Ugbu a ana m adọkwa ha aka na ntị ọzọ, ha na ndị ọzọ nile, dị ka m mere mgbe ahụ m bịara, nꞌihi na mgbe m bịara ugbu a aga m ejikere ịta onye ọ bụla mehiere ahụhụ, o nweghị onye ga-ala nꞌefu.
Ọ bụ ezie na anyị bụ ndị Juu site nꞌọmụmụ a mụrụ anyị, ọ bụ ezie na anyị abụkwaghị ndị mba ọzọ na-ebi ndụ mmehie,
Ma Kraịst agbapụtala anyị site nꞌọbụbụ ọnụ ahụ nke idebe iwu gaara ewetara anyị. O bokwasịrị onwe ya ịbụ ọnụ gaara abụ nke anyị nꞌihi mmehie anyị. Nꞌihi na e deela ya nꞌakwụkwọ nsọ sị, “Onye a bụrụ ọnụ ka onye ahụ bụ nke a na-akwụba nꞌelu osisi.”
Nke a ọ̀ na-egosi na iwu Chineke na nkwa ya na-emegide onwe ha? Mba! Chineke ekwela! Nꞌihi na a sị na a pụrụ ịzọpụta anyị site nꞌidebe iwu ọ garaghị adị mkpa Chineke inye anyị ụzọ ọzọ a pụrụ isi gbapụta anyị site nꞌagbụ mmehie.
Nꞌihi na e deela ya nꞌakwụkwọ nsọ sị na anyị bụ ndị mmehie kere agbụ. Ụzọ mgbapụ dịịrị anyị bụ inwe okwukwe nꞌime Jisọs Kraịst.
Onye e sitere nꞌaka ya mee ka anyị nwere onwe anyị; onye gbaghakwaara anyị mmehie anyị nile.
Nke a metụtakwara unu, ọ bụ ezie na unu bụ ndị na-anọghị Chineke nso na mbụ. Mgbe ahụ unu bụ ndị iro ya, ndị mmehie ha na echiche ọjọọ ha, na omume ọjọọ ha, mere ka Chineke dị anya nꞌebe unu nọ. Ma ugbu a, ọ kpọbatala unu dị ka ndị enyi ya.
O hichapụrụ ụgwọ mmehie nile unu ji, ụgwọ iwu ahụ nile unu na-edebeghị. O weere mmehie ndị a nile laa ha nꞌiyi, site nꞌịkpọgide ya nꞌelu obe Kraịst.
Nꞌelu obe ahụ, Chineke napụrụ ekwensu ike o ji ebo unu ebubo mmehie. O mekwara ka mmeri Kraịst meriri ekwensu nꞌelu obe ahụ e si wezuga mmehie unu, pụta ìhè nye mmadụ nile.
1 TIMỌTI 5:24
Cheta na ụfọdụ mmadụ, ọ bụladị ụfọdụ ndị ụkọchukwu, na-ebi ndụ mmehie nke onye ọ bụla maara ihe banyere ya. Nꞌụdị mmehie dị otu a, i nwere ike ikwu okwu banyere ya. Ma e nwere mmehie ndị ọzọ nke anya naadịghị ahụ. Ha ga-apụta ìhè nꞌụbọchị ikpe.
2 TIMỌTI 2:16
Wezuga onwe gị nꞌokwu nzuzu na nke rụrụ arụ nile, ụdị okwu nke na-eduba mmadụ nꞌime mmehie, ma na-eweta iwe nꞌetiti mmadụ na ibe ya.
Nꞌezie, ọ bụ eziokwu ka o kwuru. Nꞌihi nke a gwasie ha okwu ike banyere mmehie ha na-atụghị ụjọ. Ọ bụ nanị nke a ga-enyere ha aka ibi ezi ndụ nꞌime okwukwe anyị.
Nꞌihi na ọgụgụ isi onye dị otu a bụ ọgụgụ isi ime ihe ọjọọ. Ọ bụ onye na-eme mmehie, ọ matakwara na ọ na-eme ya.
Nꞌihi na a na-esite nꞌetiti ndị mmadụ họpụta onyeisi nchụaja. A na-ahọpụta onye ahụ ka ọ bụrụ onye na-anọchite anya mmadụ ibe ya nꞌihu Chineke. Ọ na-achụkwa aja, na-enye Chineke onyinye nꞌihi mmehie ndị ya.
Ọ na-azọpụta ruo ọgwụgwụ oge. Ọ ga-azọpụtakwa ndị nile ga-esite nꞌaka ya bịakwute Chineke. O nwere ike ime nke a nꞌihi na ọ na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-adị ndụ ka o chetara Chineke na ọ kwụchaala ụgwọ mmehie anyị nile. Ọ na-adịkwa ndụ mgbe nile, na-arịọrọ anyị arịrịọ nꞌihu Chineke.
Jisọs adịghị ka ndị nchụaja ọzọ. Ọ dịghị mkpa na ọ ga-achụ aja nke ụmụ anụmanụ ụbọchị nile nꞌihi mmehie ya. Ọ dịkwaghị mkpa na ọ ga-achụrụ ndị mmadụ aja nꞌihi mmehie ha. Nanị otu aja karịrị ukwuu ka Jisọs chụrụ. O weere onwe ya chụọ aja nꞌelu obe nꞌihi anyị, ka ọ bụrụ ọgwụgwụ ọchụchụ aja nile, nꞌihi na aja ahụ ọ chụrụ zuru oke ruo mgbe nile.
Ma ọ bụ nanị onyeisi nchụaja na-aba nꞌebe ahụ a na-akpọ Ebe Nsọ Kachasị ebe Nsọ. Ọ na-aba nꞌebe ahụ nanị otu mgbe nꞌafọ. Ọ na-ejikwa ọbara na-aba nꞌebe ahụ. Ọbara ọ ga-eji buru ụzọ chụọ aja nꞌihi mmehie nke onwe ya. Mgbe ọ chụchara aja nꞌihi onwe ya, ọ na-achụkwa aja nꞌihi ndị ya nile.
Na mgbe ochie, ọ bụrụ na ọbara ewu na nke ehi, ya na ntụ e wetara site nꞌebe a kpọrọ anụ ndị a ọkụ, nke e fekwasịrị ndị rụrụ arụ, pụrụ ihicha mmehie, meekwa ka ha dị ọcha,
Kraịst wetara ọgbụgba ndụ ọhụrụ a ka ndị nile Chineke kpọrọ bịaruo nso iketa nkwa ebighị ebi Chineke kwere ha. Ugbu a ndị nile Chineke kpọrọ nwere ike ịbịaru ya nso, nꞌihi na Kraịst nwụrụ gbapụtakwa ha site nꞌikpe ọmụma dịrị ha nꞌihi mmehie nile ha mehiere nꞌọnọdụ ọgbụgba ndụ ochie ahụ.
A sịkwarị na ọ bụ ihe dị mkpa na Kraịst kwesịrị iji onwe ya chụọ aja ọtụtụ mgbe ọ gaara na-anwụ site nꞌoge ruo nꞌoge kemgbe ụwa bidoro. Ma o sighị otu a dị! Kama Kraịst bịara nanị otu ugboro mgbe ọgwụgwụ ihe nile dị nso, iwepụ mmehie site nꞌiji onwe ya chụọ aja.
Ọ bụrụ na iwu pụrụ ime ihe dị otu a otu ugboro ka a gaara achụ aja. Otu aja ahụ gaara ewepụkwa echiche mmehie ọ bụla nꞌime ndị chụrụ ya.
Ma aja nile ahụ ha na-achụ kwa afọ ehichapụghị mmehie ha. Nanị ihe aja ndị a mere bụ ichetara ha na mmehie ha dị.
Nꞌezie, ọ pụghị ime! Ọbara ewu na ehi apụghị ihichapụ mmehie mmadụ!
Gị bụ Chineke adịghị aṅụrị ọṅụ nꞌịta nsure ọkụ ma ọ bụ nꞌịta na-esi isi ụtọ ọ bụla maka ịsachapụ mmehie.
Ma mgbe ihe ndị a gasịrị, Jisọs kwuru sị, “Lee abịala m Chineke, ime ihe ị chọrọ ka m mee.” Nꞌihi aja Jisọs jiri onwe ya chụọ, Chineke ewepụla ụzọ ịchụ aja ochie ahụ e ji agbaghara mmehie, were ụzọ ọhụrụ nke ọchụchụ aja Kraịst dochie nꞌọnọdụ ya.
Nꞌọnọdụ usoro ochie ahụ, ndị nchụaja na-eje ozi ha ụbọchị nile. A na-ahụ ha ka ha ji otu ụdị aja ahụ, aja na-apụghị iwepụ mmehie.
Site nꞌotu aja ahụ Kraịst jiri onwe ya chụọ o mere ka ndị ahụ zuo oke ruo mgbe ebighị ebi bụ ndị ahụ a sachapụrụ mmehie ha.
Agaghị m echetakwa mmehie ha nile, ya na nnupụ isi ha nile ọzọ.”
Ọ họọrọ isoro ụmụ Chineke takọọ ahụhụ karịa inwe anụrị nke mmehie. Ọ jụrụ ibi na mmehie jụkwa akụ na ụba nke Ijipti. Ọ matara na ihe ndị a agaghị adịgide ruo ebighị ebi. Nꞌihi nke a ọ họọrọ isoro ụmụ Izirel ịhụ ahụhụ.
1 PITA 1:19
Ọ bụ ọbara dị oke ọnụ ahia nke Kraịst wụsịrị ka e ji gbapụta unu; ọbara Kraịst ahụ, onye na-emeghị mmehie, na onye dị ka nwa atụrụ na-enweghị ntụpọ ọ bụla.
Nꞌelu obe ahụ, Kraịst buuru mmehie anyị nile bokwasị onwe ya mgbe ọ nwụrụ, ime ka anyị nwee ike ịbụ ndị nwụrụ anwụ nꞌebe mmehie dị, ma dịrị ndụ nꞌebe ezi omume dị. Ọ bụkwa site na mpa ọnya dị ya nꞌahụ ka o ji gwọọ anyị.
2 PITA 1:9
Ma onye ọ bụla na-atụkwasịghị ihe ndị a nꞌokwukwe ya nọ nꞌọchịchịrị. Ọ naghị ahụ ụzọ. Ọ bụkwa onye na-echefu na Chineke sachapụrụ mmehie ya nile ime ka o bie ndụ dị mma nꞌihu Onyenwe anyị.
Ụmụ m, ana m edere unu ihe ndị a nile ka unu si nꞌime mmehie pụta. Ọ bụrụkwanụ na onye ọ bụla nꞌime unu emee mmehie, anyị nwere Jisọs Kraịst, onye na-eguzo nꞌihu Chineke, bụ Nna anyị, arịọrọ anyị arịrịọ. Jisọs Kraịst pụrụ ime nke a nꞌihi na ọ dị ọcha bụrụkwa onye na-eme ihe na-atọ Chineke ụtọ nꞌụzọ nile.
Jisọs bụ onye ahụ hụrụ ahụhụ nꞌihi mmehie anyị si otu a mee ka anyị bụrụ ndị nwere ike ịbịakwute Chineke. Ọ bụ Kraịst mere ka Chineke gbaghara anyị mmehie anyị nile, na mmehie ụwa nile.
1 JỌN 3:4
Ma ndị ahụ na-anọgide nꞌime mmehie na-emehie megide Chineke. Nꞌihi na mmehie ọ bụla mmadụ mere bụ mmehie megide ihe Chineke naachọ.
1 JỌN 3:5
Unu maara nke ọma na e mere ka Kraịst pụta ìhè iwepụ mmehie anyị nile. O dịkwaghị mmehie ọ bụla dị nꞌime ya, ọ dịghị mgbe ọ bụla o mere ihe Chineke na-achọghị.
1 JỌN 3:6
Ya mere, ọ bụrụ na anyị anọọ Kraịst nso na-eme ihe ọ chọrọ, anyị agaghị ebi ndụ mmehie. Ma ndị ahụ na-ebi ndụ mmehie na-ebi ndụ ahụ nꞌihi na ha amaghị onye Chineke bụ. Ha abụkwaghị ndị a zọpụtara azọpụta.
Ma ọ bụrụ na ị na-anọgide na-ebi ndụ ime mmehie oge nile, o gosiri na ị bụ nke ekwensu. Nꞌihi na ekwensu bụ onye na-emehie site na mmalite ihe dum. Mmehie bụkwa aka ọrụ ya. Ma Jisọs Ọkpara Chineke bịara nꞌụwa ịla ike na ọrụ nile nke ekwensu nꞌiyi.
1 JỌN 3:10
Ya mere, anyị pụrụ ịkọwa onye bụ nwa Chineke na nwa ekwensu. Onye ọ bụla na-ebi ndụ ime mmehie na nke na-ahụghị nwanna ya nꞌanya esiteghị nꞌezinụlọ Chineke.
2 JỌN 1:11
Nꞌihi na ọ bụrụ na unu ekwenyere ya, unu ga-aghọ ndị enyi ya, soro ya nꞌomume mmehie ha nile.
3 JỌN 1:11
Ezi enyi m m hụrụ nꞌanya, ekwela ka ụdị omume ọjọọ dị otu a bata nꞌime gị. Bụrụ onye na-agbaso ihe ziri ezi na eziokwu mgbe nile. Cheta na ndị nile na-eme ezi ihe na-egosi na ha bụ ụmụ Chineke. Ma ndị ahụ na-anọgide na-adị ndụ nꞌime mmehie na-ezipụta na ha bụ ndị dị anya site nꞌebe Chineke nọ.
Ọ na-abịa ikpe mmadụ nile ikpe. Ọ ga-enye ndị mmehie ezi ikpe ọmụma ruuru ha, nꞌihi mmehie ha na okwu ọjọọ nile ha kwuru megide Chineke.”
“Ma e wezụga ezi ama ndị a, enwere m ihe ụfọdụ megide gị. Ị na-akwagide ụfọdụ nꞌetiti ndị m bụ ndị na-eme omume dị ka Belam, onye ziri Balak otu ọ ga-esi merụọ ụmụ Izirel site nꞌiduba ha na mmehie ịkwa iko na oriri mmemme dị iche iche a na-emere arụsị.
“Ma enwere m ihe ndị a megide gị. Ị na-anabata nwanyị ahụ a na-akpọ Jezibel, onye na-ekwupụta na ya bụ onye amụma nwanyị, onye na-akụziri ndị m na mmehie ịkwa iko bụ ihe ziri ezi. Ọ na-akwagide ha ka ha na-akwa iko, na-akụzikwara ha ka ha na-eri ihe a chụrụ nꞌịta nye arụsị.
Ndị eze nke ụwa, ndị sooro ya mee mmehie ịkwa iko, ndị ṅụrịkwara ọṅụ nꞌihi ihe ọma nke mmekọta ha na ya na-eweta ga-eru uju nꞌihi ya, mgbe ha ga-ahụ anwụrụ ọkụ nke na-apụta mgbe a na-akpọ ya ọkụ.
Nꞌihi na ikpe ikpe ya nile ziri ezi, bụrụkwa eziokwu. Ọ taala nwanyị ahụ na-akwa iko, na onye jiri mmehie ya merụọ ụwa ahụhụ. Ọ bọọlara ndị ohu ya e gburu egbu ọbọ.”